लकडाउन के हो? के–के हुन्छ यस्तो अवस्थामा? - Sawal Nepal
काठमाडौं- सरकारले मंगलबार (११ गते)देखि लागू हुने गरी अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। संक्रामक रोग ऐन २०२० को व्यवस्थाअनुसार मंगलबार विहान ६ बजेदेखि १८ गते विहान ६ बजेसम्म कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्कन नमिल्ने आदेश दिएको छ।
उच्चस्तरीय समितिको बैठको निर्णय गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले औषधिउपचार र अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्कन नपाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। बैठकले अस्पताल, सुरक्षाकर्मी तथा अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि सवारी साधन सञ्चालन हुन नदिने निर्णय गरेको पनि खतिवडाले बताए।
बैठकले व्यवसायीले औषधि तथा औषधिजन्य वस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको कालोबजारी तथा अवैध भण्डारण गर्ने तथा आपूर्तिमा अवरोध गर्नेमाथि कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए।
संक्रमक रोग ऐनअनुसार भएको यो निर्णय कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा बाबुराम मरासिनीका अनुसार लकडाउन भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रलाई सरकारले बन्द गर्नु हो। उक्त क्षेत्रलाई प्रहरीले चारैतिरबाट घेरा हाल्छ।
यो एक प्रकारको कर्फ्यू जस्तै हो। कर्फ्यु निश्चित समयका लागि हुन्छ भने लकडाउनको समय रोग अनुसार हुने उनले बताए।
नेपालमा लकडाउन हुन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला विज्ञहरु भने लकडाउन कार्यान्वयन सहज नहुने बताउँछन्।
सरकारले लकडाउनसँगै मानवीय सहायतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। बिहान कमाएर बेलुकी खाने पनि धेरै छन्। उनीहरुले के गर्ने? ग्यास सकियो, खानेकुरा सकियो भने घर–घरमा पुर्‍याउने व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्छ? उनले प्रश्न गरे।